Variable Declaration in C++ — MYSTERY ZILLION
May 2009 edited June 2009 in C++
Variable တစ်ခုကို Declare လုပ်ချင်တာဗျာ..
အဲ့ variable က int လည်းဖြစ်နိုင်မယ်.. long လည်း ဖြစ်နိုင်မယ်.. double လည်းဖြစ်နိုင်မယ်
function ဆိုရင်တော့ template ကို ကျွန်တော်သုံးလိုက်မှာပါ..
ကျွန်တော် လုပ်ချင်တာက ဒါမျိုးဗျာ.. ဥပမာ ထားပါတော့...
Type add(Type a, Type b)
type type1, type2;                     // what type of data i should declare
cout<<"Enter two number to add : ";
type type3 = add(type1, type2);
variable တွေကိုလည်း template ရေးရမှာလား.. ဘယ်လိုကြီးလဲ.. java script တို့ php တို့ဆိုရင်တော့ ရှင်းတယ်.. var num, $var ဆိုရင် သူ့ဖာသာ int, double .... ဘာဖြစ်ဖြစ် အကုန် calculate လုပ်မယ်.. C++ မှာ အဲ့လိုမျိုး keyword တွေများ ရှိသေးလား ?? ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို ရေးရမှာလဲ..
လို့ ကြေငြာတယ် ဆိုရင်..
cin မှာ user က double နှစ်ခုကို ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ရင်.. result တော့ ထွက်လာတယ်.. int value လေးပဲပေါ့နော်..
data type က အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာကို ဘယ်လို ရေးမလဲ မေးချင်တာပါ..
sorry ဗျာ.. ကျွန်တော်က နည်းနည်းပိန်းတယ်ဗျ.. :2: အစ်ကို နားမလည်ဘူးနဲ့တူတယ်..
cin မှာ user ကနေမှ ဘာ data type ရိုက်ထည့်ထည့် ပေါင်းနုတ်မြောက်စားလုပ်ချင်တာ..
you have to use some library like boost:Any
and btw read the this wiki about Strong Typing
strongly typed programming ကို သေချာ ဖတ်ကြည့်ပါဦးမယ်..
အဲဒိလိုလုပ်ချင်ရင်ကိုယ်ပိုင် class တစ်ခုလောက်ရေးမှရမယ်ထင်တယ်နော်..အကောင်းဆုံးကတော့ float type ထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်